​विना अप्रेसन बच्च जन्माउने हो ? ख्याल गर्नुहोस् यि कुरा
Sunday, 18 Nov, 2018 2:14 PM
कुनै पनि महिलाको जीवनमा आमा बन्नु एक सुखद अनुभव हो । बच्चा जन्माइसकेपछि महिलाले आफूलाई पूर्ण भएको महसूस गर्छिन । गर्भावस्थाको अवधिमा उनले अनेकौं समस्यासँग जुध्नु पर्छ । महिलाले आफ्नै अंश बढेको अनुभव गर्छिन । यस्तो समयमा उनको दिमागमा एक प्रश्न निरन्तर आइरहेको हुन्छ । बच्चा कसरी जन्मेला ? सामान्यरुपमा या अप्रेसन नै गर्नुपर्ने हो कि ?
बच्चालाई जन्म दिनु भनेको एक जटिल र असहनीय पीडायुक्त प्रक्रिया हो । नर्मलरुपमा बच्चा जन्मनु भनेको आमा र शिशु दुबैका लागि दीर्घकालीन फाइदाको विषय हो । यदि कुनै कारणवश गर्भवती महिलाले अप्रेशनमार्फत सुत्केरी हुनप¥यो भने यसले लामो समयसम्म महिलालाई विभिन्न समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । जुन महिला प्रसव पीडाबाट बच्च चाहन्छन् तिनीहरुले अप्रेसन रोज्छन । तर आमरुपमा मानिसहरु नर्मल सुत्केरी हुनुलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् । यदि तपाई पनि अप्रेसनविना सामान्यरुपमा सुत्केरी हुन चाहनुहुन्छ भने यि कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस ।
खानपानमा उचित जोड
गर्भावस्थाको दौरान आफ्नो खानपानमा निकै ध्यान दिनुपर्छ । यसको लागि उचित मात्रामा पानी पिउने गर्नुहोस । कैफिन पाइने चिया र कफीको सेवन कम गर्नुहोस । आफ्नो खानामा यस्तो कुरा सामेल गर्नुहोस जसले गर्दा आमा र बच्चा दुबैलाई पोषण पुगोस । डाक्टरमो मद्यतले डाइट चार्ट तयार गर्न सकिन्छ ।
गर्भावस्थाको दौरान उत्पन्न हुनसक्ने जटिलताबाट बच्न नियमतिरुपमा व्यायाम गर्नुहोस । यो समयमा गह्रौ सामान उचाल्ने काम नगर्नुहोस । यदि तपाई व्यायाम गर्न अल्छि मान्नुहुन्छ भने आफ्नो घरको हल्का काम भने गर्न नछोड्नुहोला । दिनमा केही समय टहलिने गर्नुहोस् । यस्तो गरेमा सामान्यरुपमा सुत्केरी हुने संभावना बढेर जान्छ ।
तनावबाट टाढै बस्ने
गर्भवती भएको बेला महिलाहरुका अनेक प्रकारको बदलाव आउँछ । शारीरिक मात्र होइन मानसिकरुपमा पनि प्रभावित हुन्छन् । बच्चा जन्माउँदै छु भन्ने खुसी मनमा आइरहेको हुन्छ ।तर बेलाबखत शरीरमा आउने पीडाले पनि उत्तिकै सताइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि गर्भवती महिलालाई तनाव हुनु सामान्य हो । पहिलोपटक गर्भवती भएका महिलामा यो समस्या अधिक देखिन्छ । यस्ता तनावलाई सामान्य रुपमा लिएर यसको उपचारविधि खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यदि गर्भावस्थाको पुरै समय तनावमै वित्यो भने सुत्केरीहुँदा अप्रेसन गराउनुपर्ने संभावना बढेर जान्छ ।
ध्यान गरेर विताउनुहोस समय
गर्भावस्थामा महिलाहरुले तनावबाट बच्न मेडिटेशनको सहारा लिनु उत्तम हुन्छ । यसले तपाईँको ‘स्ट्रेस लेवल’लाई कम गर्छ । साथै पेटभित्रको बच्चालाई भरपुर मात्रामा अक्सिजनको प्रवाह हुन्छ । मेडिटेशनले तपाईको सामान्यरुपमा सुत्केरी हुने संभावनालाई बढाउँछ ।
सही डाक्टरको छनौट
गर्भावस्थामा यस्तो डाक्टरलाई छान्नुहोस जसले सुरुवाती चरणदेखि तपाईको सुत्केरी हुने बेलासम्म सही मार्गनिर्देशन गर्न सकोस । आजकल धेरैजसो डाक्टरहरुले अप्रेशनलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । त्यसैले आफूले भरोसा गरेको डाक्टरको छनौट यो बेला महत्वपूर्ण हुन्छ ।